Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Goobaha Sandals: Toban sano oo aan wajahayno Kariibiyaanka
Wararka Antigua & Barbuda • Bahamas News Breaking • Barbados News Breaking • Caribbean • Curacao Breaking News • Wararka Grenada • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • Waajib ah • Wararka Saint Lucia • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Sandals Foundation oo caawisa Kariibiyaanka
Sannadkan waxaa la xusayaa sannad-guuradii 10-aad ee Aasaaska Sandals, oo ah qaybta samafalka ee Sandals and Resorts Resorts. Tobankii sano ee la soo dhaafay, Sandals -ka ayaa si hagar la'aan ah u shaqeeyay si ay si togan u saameeyaan nolosha in ka badan 840,000 oo qof oo ku baahsan Kariibiyaanka.
Sandals Resorts International waxay qaadatay wax badan oo u baahan in laga qabto jasiiradaha ay ka hawlgasho.
Kaliya maahan aruurinta iyo kharash -gelinta lacagta maadaama Sandalsku sidoo kale ka faa'iideysto hamigiisa, tamartiisa, xirfadiisa, iyo awooddiisa astaanta.
Sandals Foundation waxay wax ka qabataa arrimaha diiradda lagu saaray saddex cinwaan oo balaaran - waxbarashada, bulshada, iyo deegaanka.
Sandals Resorts waxaa ka go'an maalgashiyo abuuraya saamayn togan oo waara oo ku saabsan jasiiradaha ay ugu yeeraan guriga. Iyada oo loo marayo Sandals Foundation, Sandals Resorts International ayaa awood u leh in ay qaadato wax badan oo u baahan in laga qabto jasiiradaha ay ka shaqayso iyada oo Kaariibiyaanka ka dhigaysa tan ugu fiican ee ay noqon karto. Ma aha oo kaliya ururinta iyo qarashgareynta lacagta. Sandalsku wuxuu kaloo ka faa'iideystaa xiisaha, tamarta, xirfadaha, iyo awoodda summada si wax looga qabto arrimaha diiradda lagu saaray saddex cinwaan oo balaaran - waxbarashada, bulshada, iyo deegaanka.
The Sanduuqa Sandals wuxuu siiyaa carruurta iyo dadka waaweynba aaladaha daruuriga ah sida deeqaha waxbarasho, sahayda, teknolojiyadda, barnaamijyada akhris -qorista, la -talinta, iyo tababarka macallimiinta, si looga caawiyo inay gaaraan awooddooda buuxda. Ilaa hadda, 59,036 rodol oo sahay ah ayaa lagu deeqay iyada oo 578 iskuul ay si wanaagsan u saamaysay, oo ay ku jiraan 2,506 kombiyuutar oo lagu deeqay; 274,517 buug ayaa lagu deeqay; 169,079 arday ayaa saamayn ku yeeshay; 2,455 macallin ayaa la tababaray; iyo 180 deeqo waxbarasho oo la gudoonsiiyey.
Sanduuqa Sandals, waxaa la abuurayaa oo la ansixiyay hindiseyaal ku lug leh oo dadka ku dhiirrigelinaya tababar xirfadeed iyo in si adag wax looga qabto arrimaha bulshada ee adag si loo xoojiyo bulshooyinka. Waxaa jiray 384,626 xubnood oo ka tirsan bulshada oo si wax ku ool ah u saameysay oo ay ku jiraan 248,714 qof oo loo maray dadaallada caafimaadka; 243,127 Qaab Weyn! Inc. Ilkaha + bukaan -socodka iCARE, 102,150 alaabta carruurtu ku ciyaarto; 4,218 bisadaha iyo eyda ayaa xammeeyay oo aan qallajin; iyo 397 dhallaanka ka hor xilli-dhiska oo hela fursad dagaal iyadoo guud ahaan ay aasaaseen kaalmada 24,215 mutadawiciin beesha ah.
Sida Sandals -ka, waxay ballanqaadayaan inay kor u qaadaan wacyiga deegaanka, horumariyaan dhaqannada wax -ku -oolka ah ee wax -ku -oolka ah, iyo inay baraan jiilalka mustaqbalka sida loo daryeelo bulshooyinkooda iyo ilaalinta agagaarkooda. Sandal -ka dartood, wacyi -gelinta deegaanku waxay gaartay 43,871 iyadoo la beeray 12,565 geed; 83,304 qoolley si badbaado leh loo dillaacay; 6,000 oo jajabkii dhuxusha ahaa ayaa la beeray; 37,092 rodol oo qashin ah oo la ururiyey; iyo 6 xarumood oo badda ah oo taageero ka helaya Sandals Foundation.
Dhammaan tabarucaadka, ha ahaato lacag, adeeg, ama nooc kale ah, 100% waxay si toos ah u taageertaa barnaamijyada Aasaaska Sandals iyo dadaallada kuwaas oo isbeddel waara u sameeya dadka iyo meelaha Kariibiyaanka.
Sandals Foundation waxay raadineysaa inay gacan ka geysato fulinta ballanqaadkeedii bulshada Kariibiyaanka si loo hagaajiyo nolosha dadka loona ilaaliyo agagaarka dabiiciga ah iyada oo loo marayo maalgelinta mashaariicda waara ee waxbarashada, deegaanka, iyo bulshada.